Ahoana ny fomba fanaovana gif amin'ny GIMP | Creatives Online
Efa ela no nampianarinay anao manaova gif amin'ny Photoshop, indrindra amin'ny fampiasana Illustrator, izay programa ahafahanao mamorona sary mihetsika. Ary, amin'ity indray mitoraka ity, te hanao toy izany koa izahay mampianatra anao ny fomba fanaovana gif amin'ny GIMP.
Raha tsy manana Photoshop ianao ary te hampiasa programa mifanaraka amin'izany, na, ho an'ny maro, mihoatra noho izany aza, toy ny GIMP, ireto ny dingana tsy maintsy ataonao mba hahatratrarana azy.
1 Inona no atao hoe GIMP
2 Ahoana ny fomba fanaovana gif amin'ny GIMP tsikelikely
2.1 Sokafy ny programa GIMP
2.2 Safidio, ovay ary kopia.
2.3 Sosona vaovao
2.5 Miasa miaraka amin'ny sosona vaovao
2.6 Mitsitsia sary mihetsika
2.7 Fetsy fanampiny hanaovana gif amin'ny GIMP
Inona no atao hoe GIMP
GIMP dia tena a programa fanovana sary izay, ho an'ny maro, dia mitovy sy matihanina tahaka ny Photoshop. Afaka ampiasain'ny mpampiasa vao manomboka izy io, manana fahalalana antonony sy matihanina izay manokan-tena amin'ny famolavolana sary.
Saingy ny ampahany tsara indrindra dia ny GIMP dia programa maimaim-poana, izay nahatonga azy ho malaza ary maro no miafara amin'ny fametrahana azy io ary manakorontana ny sariny mba hamoronana ny teti-dratsiny.
Amin'izao fotoana izao, amin'ny resaka fampandehanana azy dia lasa sarotra kokoa noho ny Photoshop, satria tsy dia intuitive loatra, fa raha mahafehy azy ianao dia afaka manao zavatra mitovy amin'ny Photoshop, ary na dia amin'ny kalitao tsara kokoa aza.
Mpianatra roa no namorona ny GIMP, Spencer Kimball sy Peter Mattis, izay, ho fanazaran-tena amin'ny semester hatolotra ao amin'ny klioban'ny solosaina ao amin'ny Oniversiten'i Berkeley, dia namorona ity programa ity, fampiharana maimaim-poana ho an'ny mpampiasa "trano" sy matihanina.
Ankoatra izany, ny fandaharana dia mihoatra noho ny Photoshop amin'ny lafiny sasany, tahaka ilay iray mitondra antsika amin'ity lahatsoratra ity, ny fomba fanaovana gif amin'ny GIMP, satria miaraka amin'ny iray hafa dia mila ny programa mifamatotra aminy isika, Illustrator, mba hahafahana manao izany. Amin'ny lafiny iray, ao amin'ny GIMP dia tsy ilaina ny programa ivelany fa afaka manao izany isika.
Ahoana ny fomba fanaovana gif amin'ny GIMP tsikelikely
Rehefa avy nahafantatra bebe kokoa momba ny GIMP sy ny antony tokony hametrahanao azy amin'ny solosainao ianao, dia homenay anao ny fanalahidy hamoronana gif miaraka amin'ity programa ity ary misy vokatra tsara. Mazava ho azy, alohan'ny hidinantsika hiasa dia ilaina ny manana izay rehetra ilainao eo am-pelatananao, amin'ity tranga ity dia:
Ny programa GIMP napetraka amin'ny solosainao. Tsy maninona na mampiasa Windows, Linux na Mac ianao, azo alaina ho an'ny rafitra fandidiana telo, ary na dia ny maro hafa aza. Ankoatra izany, manana fiteny maromaro izy io.
Ny sary na sary izay hovanao ho gif. Afaka manao zavatra tsotra ianao, miaraka amin'ny sary tokana, na azonao ampiasaina ny maromaro amin'izy ireo hanovana azy, karazana sora-baventy, izay mety ho zavatra tena angatahina amin'ny mpanjifa. Ataovy ao an-tsaina fa ny sary iarahanao dia avy amin'ny banky sary maimaim-poana, na mandoa azy ireo ianao. Aza maka avy amin'ny Internet fotsiny fa mety ho zon'ny mpamorona izy ireo.
Rehefa manana izany rehetra izany ianao dia andao hanomboka
Sokafy ny programa GIMP
Ny zavatra voalohany tokony hatao dia ny manokatra ny programa GIMP mba handehanana amin'ny solosainao. Raha vao misokatra dia mandehana amin'ny File / Open ary safidio ny sary hiarahanao.
Raha vao voalohany ianao no hanao GIMP dia izao tsara kokoa ny mampiasa sary iray fotsiny ary mijery ny fampianarana feno. Avy eo dia azonao atao amin'ny sary roa na maromaro izany.
Safidio, ovay ary kopia.
Raha vantany vao manana ny sary izay hamoronana ny gif ianao dia mila mandeha any Select / All menu. Inona no ataon'ity asa ity? Hahazo ny sary voatondro manontolo ianao, amin'ny fomba izay toa hanapahanao azy.
Na izany aza, ny tokony hataonao manaraka dia tsindrio ny menu Edit / Copy.
Hatreto, mbola tsy velona ilay gif. Fa manomboka izao dia ho tanteraka izany. Ary ny dingana manaraka tokony hataonao dia ny mandeha any Layer menu ary eo dia mifidiana New Layer ary, avelao ny soatoavina mivoaka, manaiky.
Tadidinao ve ilay kopia nataontsika tamin'ny dingana teo aloha? Izany dia namela anay handika ny sary manontolo, ary ankehitriny dia mila "manary" azy amin'ity sosona vaovao ity. Raha lazaina amin'ny teny hafa dia tsy maintsy mifikitra aminy ianao.
Mba hanaovana izany, azonao atao ny mampiasa ny fanalahidy Control + V mba hametahana na mankany amin'ny menio Edit / Paste. Izany dia hamorona fifantenana mitsingevana amin'ny voalohany, midika izany fa tsy hifandray amin'ny sosona raha tsy manindry azy ianao ary mametraka ny sosona.
Miasa miaraka amin'ny sosona vaovao
Ny sary izao dia manana sosona roa mitovy sary. Na izany aza, amin'ity sosona faharoa ity no handeha hiasa.
Ary inona no hataontsika? Mandeha Layer menu / Transform / Atsipazo mitsivalana.
Izany hoe mamadika ny sary no hataontsika. Ohatra, raha manana sarin'ny ankizy manofahofa tanana amin'ny tanany havia ianao, dia avadika mitsivalana izany dia ho hita fa manofahofa tanana amin'ny tanany havanana izy.
Mitsitsia sary mihetsika
Loharano: Linux Lab
Efa saika vita isika, satria ny hany sisa tavela dia ny hamonjy azy. Ary hieritreritra ianao hoe, ahoana ny momba ny animation? Mangina. Mba hanaovana izany dia tsy maintsy mandeha any amin'ny File / Export as.
Tsy maintsy manome anarana azy ianao ary safidio ny fanitarana izay tianao hotehirizina, izay amin'ity tranga ity dia gif.
Eo amin'ny efijery izay hiseho manaraka dia tsy maintsy manamarina ny boaty "As animation" ary asio fanemorana eo anelanelan'ny sosona iray sy iray hafa farafahakeliny 250 milisegondra. Azonao atao ny manova ny fotoana amin'ny sitrapo sy araka ny endrika tianao hoforonina.
Farany, tsy maintsy manindry fotsiny ianao Save dia ho vita izany. Avela hijerena azy fotsiny izy io mba hanomezana vahana na hamerenana azy (izany no maha-zava-dehibe ny tsy hanakatona ny sary na ny programa raha tsy efa nandinika azy).
Fetsy fanampiny hanaovana gif amin'ny GIMP
Alohan'ny handaozanao ny lohahevitra (na dia manana fisalasalana aza ianao dia afaka mametraka anay amin'ny fanehoan-kevitra ny fanontanianao ary hiezaka hamaly azy ireo izahay) te hanome anao fika fanampiny izahay. Ary izany no izy, rehefa manao animation ianao dia mety indray mandeha ihany no tianao hihetsika. Na avela hiverimberina.
Raha io safidy faharoa io dia tsy maintsy jereo ny boaty "loop perpetual", satria io no hiverimberina foana. Raha tsy izany, dia hanao ilay hetsika indray mandeha izy ary hijanona ho static (ary raha te hifindra indray dia tsy maintsy manakatona ny sary ianao ary sokafy indray na hamelombelona ny efijery).
Ity no fomba fototra indrindra hamoronana gif miaraka amin'ny GIMP fa tsy izy irery. Raha ny marina, rehefa mahafehy an'io ianao dia azonao atao ny manandrana mamorona gif amin'ny sary iray amin'ny alàlan'ny fanjavonan'ny singa (ohatra, sary misy fototra mafy sy tarehimarika maromaro eo amboniny). Ary, na dia mandroso kokoa aza, mamorona gif misy sary maromaro. Ho sahy hanohy ve ianao?
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Famoronana an-tserasera » General » Tutorials » Ahoana ny fomba fanaovana gif amin'ny GIMP